Dhaqanka - Suzhou Ocan polymer Waxyaabaha Co., Ltd
1. Our Mission: Kor horumarinta warshadaha wax, nolosha dhig fiican la technology
mission Corporate waa ujeedada iyo sababta jiritaanka ganacsi iyo muhiimadda badbaadada ganacsiga iyo horumarka. Waxaa guud ahaan waxaa loo isticmaalaa in lagu qeexo qiimaha ganacsi iyadoo himiladu tahay final warshadaha iyo jihada. Beegsasho on qalab polymer sare, Shirkadda waxaa intooda badan ku hawlan R & D iyo wax soo saarka ee cayn kasta oo alaabta wax la kulmaan kordhaya qalab iyo nolosha baahida dadka. dadaalka aan ugu jirno in industry wax xaqiiqo ah dallicin doontaa horumarinta warshadaha wax Chinese. The users iyo macaamiisha ka dhigi ay nolosha dheeraad ah oo ku haboon oo ka wanaagsan, waayo, waxay si toos ah ama si dadban isticmaalin waxyaabaha our.
Waxaan ka dhigi shaqada shirkadaha ka fikradaha ay muuqaalaynta by "Kor horumarinta warshadaha wax, samee nolosha fiican la technology", kaas oo keenaya xidhiidh dheeraad ah, iyo koboca of alaabta iyo image shirkadaha our, qiimaynta ilaa booska bulshada ee Shirkadda.
2. Our Vision: In la abuuro a fasalka-koowaad ganacsi qaran oo ay noqoto astaanta ah shirkadaha sarsare ee hoggaaminaya
aragtida Corporate waa uun qorshe muddo dheer ah, gool kama dambaysta ah, xitaa rajo-profile sare iyo jihada horumarka ah. geesinimada iyo niyada cabsi la'aan waa waajib ah shirkadda si ay u gaaraan taagyeero ku guulaystaan ​​tartanka kulul si shaqaalaha waxaa lagu dhiirigelinayaa inay hore u soco si geesinimo leh ee safarka dheer. Waxaan ku dadaaleynaa in ay qaataan hogaanka duurka ku qalab iyo kor loogu qaado warshadaha qaranka Shiinaha ayaa qeyb ka mid ah dhaqaalaha Chinese. Aragtidayadu waa kaliya in la abuuro a fasalka-koowaad ganacsi qaran oo ay noqoto astaanta ah taasoo keentay in industry ee.
II. Ruuxa our
ruux Corporate waa nooc ka mid ah miyir group weheliso miyir casri ah shakhsiyadda shirkadaha. Waxaa inta badan soo koobi foomka luqadaha kooban iyo falsafada iyo gaalda, ayaa muujiyay by warshad song, dhiga warshad, xeerarka warshad iyo Astaanta warshad. Guud ahaan, ku tilmaamay sida caadiga ah habdhaqanka, doonista iyo maskax ay wadaagaan dhammaan ama inta badan shaqaalaha, ruuxa shirkadaha kicin kara xamaasad shaqaalaha iyo loo xoojiyo koboca ee shirkada. Sida fikirka badan oo ka tirsan kooxda shaqaalaha set maskaxda, waa wadnaha ee falsafada ganacsiga, Faraj qiimaha iyo caqiidada maaraynta ganacsiga iyo sidoo kale saldhig u ah dhaqanka shirkadaha.
Ruuxa Our Corporate:
Unity & Halganka, Pioneering & Innovation, Daahirinta & kaliyeeli, Operation lagu kalsoonaan karo
Tayada & Karti, Mutual Benefit, wadida Excellence, Fulinta Final